बलिउड नायक अर्जुन रामपालको घरमा एनसीबीको छापा - नेपालबहस
बलिउड नायक अर्जुन रामपालको घरमा एनसीबीको छापा
| १५:२६:५५ मा प्रकाशित
२५ कार्तिक, काठमाडौं । नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपश्चात बलिउडका केही नायिकासँग भारतको एनसीबीले ड्रग्सको मुद्दामा सोधपुछ गरिसकेको छ । सुशान्तको निधनको एउटा कारण ड्रग्स पनि रहेको प्रष्ट भएपछि एनसीबीले बलिउडका केही कलाकारमाथि निगरानी राखेको छ ।
सोमबार मात्रै निर्माता फिरोज नाडियाडवालाको घरमा ड्रग्स भेटिएपछि उनलाई हिरासतमा राखिएको छ । एनसीबीले नायक अर्जुन रामपालको घरमा पनि छापा मारेको छ । अर्जुनकी प्रेमिकाका भाई ड्रग्सको मुद्दामा जोडिएपछि रामपालको घरमा छापा मारिएको हो ।
अर्जुनको घरबाट केही सुराक भेटिने आशंकामा एनसीबीले छापा मारेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । यसैविच, एनसीबीले अर्जुन रामपालको मोबाइल पनि बरामद गरेको छ । अर्जुनलाई बुधबार सोधपुछका लागि बोलाइएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।
बागलुङमा रहेका एचआइभी सङ्क्रमितहरु खुल्न थाले ४४ मिनेट पहिले
महामारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति उपेक्षित : अध्यक्ष शर्मा २२ घण्टा पहिले
कोर इलाकामा ३५ वर्षको भाले गैँडा मृत फेला ३ घण्टा पहिले
‘कृषकका गुनासा हट्न समय लाग्छ : मन्त्री भुसाल ३ दिन पहिले
बानेश्वरमा बस, ट्रक र कार ठोक्किदा चालक गम्भिर घाइते ६ दिन पहिले
खोरमा परेर चितुवा नियन्त्रण, सुरक्षितरूपमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी ५ दिन पहिले
लुम्बिनीमा सेल्फी लिँदै युवक ४ हप्ता पहिले
हाँडीगाउँको विकासका लागि एक करोड बजेट २ हप्ता पहिले
यस वर्ष तनहुँमा देउसीभैलो खेल्न नपाइने, सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ ४ हप्ता पहिले
मध्यम हिमपातको सम्भावना १२ महिना पहिले
क्वारेन्टाइनमा बसेका युवाद्धारा आत्महत्या ! ५ महिना पहिले
देशैभरको मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको हुन सक्ने सम्भावना २ वर्ष पहिले
पैसा नभएर कोही भोको बस्नु परेको त छैन ? फोन गर्नुस् हामी राहत लिएर आउने छौ ८ महिना पहिले